बाटाे बिराउँदै सहकारी ! | Enepal Patra Pvt. Ltd.
बाटाे बिराउँदै सहकारी !
काठमाडौं , २८ पुस ।ग्रामीण भेगहरुमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि सरकारले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ सहकारी विस्तारको योजना बनाएको थियो । सहकारी स्थापना र विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा अन्तर्गत एक मानिँदै आइएको छ ।
देशमा सहकारीको संख्या धेरै छ, जसको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । केही सहकारीले राम्रा कामहरु पनि गरिरहेका छन् । तर, केही नराम्रा सहकारीहरुको भीडमा राम्रा सहकारीहरु पनि हराउने अवस्था आएको छ । यो, समग्र देशका लागि नै विडम्बनाको विषय हो । त्यसैले, सहकारी क्षेत्रका वास्तविक समस्या, विकृतिहरुको पहिचान गरी समाधान गर्ने र आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नाका लागि प्रभावकारी नियमन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ